China Anti SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Edition) orinasa sy mpanamboatra | Binic
Kitapo fitsapana haingana an'ny Anti SARS-CoV-2 Antigen (fanontana colloidal)
SHANGHAI Binicare Co., LTD dia miasa amin'ny vokatra vitro diagnostic (IVD) Coronavirus, izay misy ny test antigen haingana sy ny kitapo fitiliana antibody. Ny orinasa misy anay dia ao Qingdao, ary ny departemantan'ny varotra any amin'ny foibe dia any Shanghai. Izahay dia solontenan'ny Qingdao AIBO Diagnostic Co., LTD manerantany. Ny Anti SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) dia ampiasaina amin'ny fitiliana ny proteinina nukokrokidid virus SARS-CoV-2, izay proteinina lehibe mitahiry ny SARS-CoV-2 amin'ny santionan'ny nasal / oropharyngeal olombelona. Ny famaritana ny antigène proteinina nukokrapsid SARS- CoV-2 dia azo ampiasaina hanampiana ny famaritana ny aretin'ny virus coronavirus vaovao, ary manampy amin'ny fanandramana aloha ny aretin'ny pnemonia coronavirus vaovao ao anatin'ny vanim-potoana miafina.
SARS - CoV- 2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) dia famonoana sandwich immune. Izy io dia ampiasaina amin'ny fitadiavana proteinina proteinina nucleocapsid SARS-CoV-2, izay proteinina manan-danja voaaro amin'ny SARS-CoV-2 amin'ny santionan'ny nasal / oropharyngeal an'ny olombelona. manampy amin'ny famaritana ny tsimokaretina virus corona vaovao, ary manampy amin'ny famaritana mialoha ny aretina virus corona virus pneumonia tamin'ny vanim-potoana latent.
Ny tadim-pitsapana dia misy fonosana izay voahosotra alohan'ny anti-CoV N proteinina monoclonal proteinina eo amin'ny tsipika fitsapana. Antikôniôla iray hafa manohitra ny CoV N proteinina monoclonal proteinina izay afaka mamehy tsara amin'ny proteinina SARS-CoV-2 N, dia miraikitra amin'ny vongan-tsolika volamena ary hafafiny amin'ny tady fampifangaroana. Rehefa ampiharina amin'ireo lava-drano santionany ilay santionany, dia miforona ny proteinina SARS-CoV N sy ireo kompleksin'ny antibody misy marika ary mamakivaky ilay tsipika. Ny reagent voamarika dia ampiasaina mba hamoronana tsipika mena hita maso. Ny fisian'ny SARS-CoV-2 dia hasehon'ny tsipika fizahana mena (T) hita eo am-baravarankely. Ny membrane dia mifono miaraka amin'ny Chicken IgY amin'ny tsipika fifehezana (C). Ny tsipika fanaraha-maso (C) dia miseho isaky ny valim-pikarohana rehefa misy trosa nalaina tamin'ny alàlan'ny tsipika. Ny Control Line dia ampiasaina ho toy ny fanaraha-maso ny fomba fiasa. Ny tsipika fanaraha-maso dia tokony hiseho foana rehefa ny fomba fizahana dia tanterahina tsara ary ny reagents dia miasa araka ny niniana.
Valiny ratsy: Misy tsipika miloko iray ao amin'ny faritra fanaraha-maso (C). Tsy misy tsipika mena na mavokely miseho ao amin'ny faritra andrana (T).
Valiny tsara: Misy tsipika miloko roa miavaka. Ny tsipika miloko iray dia tokony ho any amin'ny faritra voafehy (C) ary ny tsipika miloko hafa dia tokony ao amin'ny faritra fitsapana (T), midika hoe tsara. (Toy ny etsy ambany)
Valiny tsy mety: Raha tsy voahaja ny tsipika QC C, dia tokony ho hita indray ny fikarohana na inona na inona aseho na tsia ilay tsipika fizahana. (Toy ny etsy ambany)
Teo aloha: 20g PP akanjo mitoka-monina fitafiana
Manaraka: Kitapo fitsapana haingana an'ny Anti SARS-CoV-2 Antigen (TRFIA Edition)